Filim ka hadlaya nolosha dhabta ah ee Soomaalida Maraykanka - BBC Somali
Lahaanshaha sawirka Yoni Brook
Image caption Barkhad Cabdiraxmaan wuxuu ku jilayaa filimkan magaca Aden oo ah wiil yar oo Soomaali ah oo ku nool xaafadda Cedar-Riverside ee magaalada Minneapolis
Markii filim soo saaraha madaxa banaan ee Musa Syeed uu bilaabay inuu ka safro magaaladii uu deganaa ee New York oo uu aado halka xuddunta u ah jaaliyadda Soomaalida ee ah Minneapolis, Minnesota, ayuu maqlay cabashada.
Ka muslim ahaan ka soo jeeda Waalidiin Kashmiiriyiin ah, kuna koray magaalo yar oo ku taalla Indiana, ayaa Syeed waxaa markii hore soo jiitay dhaqanaka Soomaalida. Syeed wuxuu dareemay in si kale loola dhaqmay; Muslinnimada kaliya ma aha ee sidoo kale waa isagoo ah qof madow.
Bulshada Soomaalida Maraykanka ah ee Maraykanka deggan ayaa sheegaya in uu jiro filim u ekaysiiyey argagixiso, burcad badeed, iyo askar. Filim cusub ayaa haddaba waxyaabahaas la aaminsan yahay ka hor jeeda.
Soomaalida ku nool Minnesota, kaliya lama tacaamulaan xaqiiqda ah inay yihiin dad ehlu diin ah oo laga tiro badan yahay, hase yeeshee waxaa kaloo diiradda ku haya dawladda federaalka ah ee dagaalka kula jirta argagixisada.
FBI-da ayaa sheegaysa in ilaa 30,000 ah Soomaali gobllkaas ku nool , ay ugu yaraan 20 ka mid ah oo rag iyo dumar iskugu jira safar u aadeen dibadda si ay ugu biiraan kooxda IS, tan iyo 2014. Sagaal kale ayaa lagu eedeeyey inay isku dayeen inay ku biiraan IS.
Soomaalida Minnesota horeba dhibaatooyin ayaa u soo maray, ka soo billow gabar makhaayad lagu weeraray ayadoo luqadda Sawwwxiliga ku hadlaysay, ilaa iyo dad ku hadlayey ereyo islaamka ka hor jeeda oo gobolka ayagoo dhex maraya uga digayey qaxootiga sida Soomaalida iyo Suuriyiinta in maalin uun ay magaallo weerari doonaan.
Gobolka ku yaalla bartamaha galbeed ee Kansas, seddex nin ayaa dhawaan loo xiray bam ay maleegayeen inay ku qarxiyaan dhisme ay Soomali degganaayeen.
Image caption Filmka "A Stray", Jilaaga Aden wuxuu noqday wiil Soomaali ah oo dhibban oo markii dambe lahaaday eey habow ah
Nuxurka filmkan cusub
Syeed wuxuu billowgii Janaayo 2015 bilaabay inuu booqdo xaafadda ay Soomaalidu aadka u deggan yihiin ee Cedar-Riverside ee magaalada Minneapolis, isagoo rajaynaya inuu filim ka sameeyo qof muslin ah oo ku koray bartamaha dhexe ee Maraykanka.
Wuxuu tegey masaajidyo, meelaha ay Soomaalidu ku cunteeyaan iyo bandhigyo dhaqameed. Wuxuu tababar filim samaynta ku saabsan u qabtay dhallinyaro. Ifraax Mansuur oo ah gabar filimada jisha waxay diidi jirtay codsiyada ay qorayaasha iyo suxufiyiinta u soo gudbiyaan ee ay ku doonayaan inay u isticmaalaan inay jaaliyadda ku dhex galaan. Laakin waxay Syeed u aragtay inuu ka duwan yah
Filimka, A Stray, waa sheeko ku saabsan wiil Soomaali ah oo kuray ah oo la yiraahdo Aadan, waxaana jilaya Barkhad Cabdiraxmaan. Aadan wuxuu aabihiis ku waayey dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, hooyadiina guriga ayey ku eriday ka dib markii uu dahab ka xaday.
Shaqo la'aanta ka jirta xaafadda Cedar ayaa haleeshay, wuxuuna si aan qasad ahayn u noqday qof xanaaneya eey loogu magac daray Layla. Aadan waxaa laga ceyriyey masaajidka oo uu seexan jiray.
Filimka intiisa badan waxaa lagu hadlayaa af-Soomaali, waxaase ku hoos qoran luqadda Ingiriiska, waxaana iminka laga dhigayaa shineemooyinka New York Minneapolis, ka dibna bandhigga filimada Afrikaanka ee London ayaa todobaadka dambe lagu soo bandhigi doonaa.